dayniile » Trump: Baaritaanka FBI-du ku hayso arrinta Ruushka “Maraykanka si xun bay u dhibaysaa”
Trump: Baaritaanka FBI-du ku hayso arrinta Ruushka “Maraykanka si xun bay u dhibaysaa”
Robert Mueller oo bidix taagan iyo ninkii isaga kala wareegay agaasimenimada FBI-da James Comey oo eryiddiisii todobaadkii hore ay cirka ku sii shareertay dalabka ah in dambibaare madaxbannaan loo saaro baaritaanka Ruushka
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in go’aanka lagu magacaabay dacwad ooge madaxbannaan oo dusha kala socda baaritaanna ku aadan in Ruushku uu saamayn ku yeeshay doorashadii ay “si xun u dhibayso” dalka Maraykanka.
Isaga oo ka hadlaya shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Washington ayuu diiday in wax wadashaqayn ah ay dhexmartay ol’olihiisii doorashada ee sanadkii hore iyo Ruushka.
“Waxan oo dhan waa quraafaad mana jiri wax wadashaqayn ah” ayuu yiri
Nin horay u soo hogaamiyay hay’adda dambi baarista Maraykanka ee FBI ayaa loo doortay in uu hogaamiyo baaritaannada arrintan lagu hayo.
Magacaabidda Mueller waxaa soo dhaweeyay siyaasiyiin ka kala tirsan labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraaddiga.
Baaqyadii ahaa in la sameeyo dacwad ooge madax bannaan oo hogaamiya baaritaannada la wado ayaa cirka isku sii shareeray ka dib markii madaxwyene Trumo uu shaqada ka eryay agaasimihii FBI-da James Comey todobaadkii hore.
Trump oo digniin u diray agaasimhii FBI-da ee uu xilka ka qaaday
Madaxii hore ee FBI-da oo hogaamin doona baaritaanka Ruushka
Trump FBI-da kalama hadlin sheegashada in la dhagaystay taleefoonadiisa
Khamiistiina Trump wuxuu diiday in uu isku dayay in uu saamayn ku yeesho baaritaanadii uu waday Comey.
Trump ayaa tilmaamay “in Comey uu ahaa nin shacbiyad yar”.
Trump ayaa Arbacadii sheegay in uusan taariikhda soo marin siyaasi loola dhaqmay si ka xun sida loola dhaqmay isaga ama caddaalad darrada loogu sameeyay.